Archive du 20180504
Lalàm-pifidianana kitoatoa Tsy nankatoavin’ny HCC
Namoaka ny heviny 15 andro taty aorian’ny nandraisany ny lalàna fehizoro laharana 2018-008 momba ny fitantanana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka eto Madagasikara omaly ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC).
Hetsika ho an`ny fanovana Efa misy sori-dalana aorian`ny fametraham-pialan`ny filoha
Nivondrona tao anatin`ny vovonan`ny hetsika ho an`ny fanovana ny mpanao politika maromaro mankato ny hetsiky ny solombavambahoaka miisa 73 eny amin`ny kianja 13 mey.
Hery Rajaonarimampianina Ireo mety ho antony tsy hialany…
Raha miala ao anatin’izao vanim-potoana mafana izao ny filoham-pirenena, dia banga 4 volana ny fe-potoam-piasany satria tsy maintsy miala 30 ka hatramin’ny 60 andro mialoha raha mbola ho kandida raha amin’ny volana novambra ny fihodinana voalohany.
Fanarenana ny firenena Mila olom-baovao mihitsy ve ?
Raha ny zavatra miseho ankehitriny dia mirona kokoa any amin’ny fananganana governemanta iraisana sy eken’ny rehetra no lalana hamahana ny olana ara-politika sy hisorohana ny krizy lavareny hamotika ny toekarem-pirenena.
Ralainirina Marcel “Ny fialan’ny filoham-pirenena no vahaolana”
Tsy mitsahatra mitombo an’isa andro aman’alina ankehitriny ny fanehoan-kevitra entin’ny olom-pirenena samihafa manoloana ny trangan-javatra misy eo amin’ny firenena ankehitriny ka iray amin’ireny Atoa Ralainirina Marcel filoha nasiolalin’ny “Legaliste de Madagascar”.
Depiote ho an’ny fanovana “Tsy matahotra fisamborana izahay”
Nitanjozotra namonjy ny minisiteran’ny rano sy ny angovo ary ny solika, minisiteran’ny tontolo iainana, minisiteran’ny vola, minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, minisiteran’ny mponina, ny teny amin’ny Jirama naka ireo mpiasa izay resy lahatra amin’ny tolona ireo solombavambahoaka ho an’ny fanovana sy ny mpanara-dia azy ireo maro be narahana fiara sy sorabaventy isan-karazany.
Praiminisitra Solonandrasana Mety hatao sorona
Miha malemy ny mpitondra ary miha tsy voafehy ny toe-draharaham-pirenena. Marina miharihary tsy azo lavina io.
Guy Rivo Randrianarisoa Ravao ny governemanta …
Miakatra hatrany ny maripanan’ny politika eto amin’ny firenena. Manaraka ny ara-dalàna Izahay ary tsy miala amin'izay satria Solombavambahoaka voafidy tao anaty lalàmpanorenana.
Tolona etsy amin’ny 13 mey Mitady hiverina ny tantara
Hifarana amin’ny fananganana governemanta an-dalambe indray ary ve izy ity sa ahoana ? Io no fanontaniana miverimberina any an-dohan’ireo mpanara-baovao any, indrindra ireo efa niaina ny ngidin’ny vokatr’ireo krizy hafa nifanesy teto Madagasikara.
Olivier Rakotovazaha Nitory an’i Hanitra Razafimanantsoa sy Hery Rasoamaromaka
Nametraka fitoriana eny amin’ny fampanoavana Anosy ny Loholona Olivier Rakotovazaha noho ny ambara fa herisetra natao azy sy ny mpiara-miasa taminy nandritra ny hetsika famoahana ireo mpiasa tao amin’ny biraon’ny antenimierandoholona nataon’ireo depioten’ny fanovana ny alarobia 2 aprily teo.
Fitokonana sy fidinana an-dalambe Tsy mbola misy akony ratsy amin’ireo mpandraharaha hatreto aloha
Tsy mbola manana olana aloha hatreto ireo mpandraharaha Malagasy na dia ao anatin’ny tolona hirosoana amin’ny fanovana aza isika eto Madagasikara.
MIDERA TENA HO MPIKATSAKA NY SOA IOMBONANA
Tombontsoa iombonan`iza ity arovanao hatrany ? Tombontsoan`ny vahiny fa tsy ny an`ny teratany ? Dia somparana daholo ny orinasa Malagasy Fa karana sy sinoa no omena vahana eto an-dasy ?
Sendikan’ny mpiasan’ny Banky BFV sy BTM Mbola mijoro ary manohana ny hetsiky ny depiote
Nisy ny fanambarana nataon’ny Sendikan’ny mpiasan’ny Banky BFV sy BTM (SADB) teo aloha manoloana ny toe-draharaha politika misy eto amin’ny firenena.
Fifaninanana nahandro ho an’ny ankizy Raikitra ny “Tsikonina 2018” karakarain’ny CUA
Manomana ny “Tsikonina 2018” ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana izao.
Fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety Mbola adihevitra ny eto Madagasikara
Nomarihina omaly alakamisy 3 mey ny andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ka tany Toamasina no ivon’izany ho an’ny teto Madagasikara, ary efa nanomboka ny 2 mey ny hetsi-panamarihana.
Fidy mpanentana Hamoaka ny tsiambarantelon’i Madagasikara
Hitako tamin’ny fahitana sy fantatro tamin’ny fikarohana sy ny fandinihana lalina nataoko nandritry ny taona maro, hoy ny mpitondra fivavahana fantatra amin’ny anarana hoe Fidy mpanentana, ireo fototry ny olam-pirenena nahatonga antsika ho amin’ny toe-draharaha misy ankehitriny.
1/4-dalan’ny lalao basikety Tompondaka N1 B Misongadina hatrany ireo ekipa lehibe
Ekipa solontenan’Analamanga 2 (Dtsc sy Ecbba) ary ekipa solontenan’i Vakinankaratra, Itasy, Matsiatra Ambony, Boeny,
Miandry sarom-bilany hipoaka
Miha miakatra ihany ny maripana eny Ambalambahoaka eny amin’izao. Niaraha-nahita ny zava-nitranga nanomboka ny alarobia teo fa efa niverina nanao fanambarana indray ny avy eo anivon’ny foloalindahy ary manainga ny herivelona rehetra hiaraka hikaroka ny vahaolana hisian’ny marimaritra iraisana.
FIM andiany faha-13 Omena vahana manokana ny mpandraharaha vehivavy
Tanterahina nanomboka omaly etsy amin’ny zone Forello Expo Tanjombato haharitra efatra andro ilay « Foire International de Madagascar « andiany faha-13 karakarain’ny agence de communication la première ligne.
Mpiompy Malagasy Miha liana amin’ny fidirana amin’ny sehatra matihanina
Maro ny tanora mahita sy miha mahatsapa fa mahavelona ny tontolon’ny fiompiana raha eto Madagasikara, hoy ry zareo avy eo anivon’ny Farmashop, izay orinasa misehatra eo amin’izay tontolon’ny fiompiana izay.
Hetsika Madajazzcar Mitohy hatrany ny dia
Na eo aza ny raharaham-pirenena manomboka miha mafampana dia tsy maintsy ilaina foana ny fampitoniana kely ny fangotraham-po amin’ny alalan’ny mozika sy ny tontolony.
Lasa i Rolly Mercia sy ny forongony indray no nahazo sehatra tamin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izay notohanan’ny Unesco tany Toamasina omaly 3 mey.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina nahafatesana olona iray teny Anosizato omaly maraina.
Hani-masaka eny an-dalambe Tena mandeha be ny tsena amin’izao
Nahazo aina mihitsy ireo mpivarotra hani-masaka teny Analakely hatramin’ny niantombohan’ny tolona no mankaty.